Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Gelatin - Shiinaha Warshadda Gelatin ee La Cuno
Gelatin cuntada waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha nacnaca. Mid ka mid ah ayaa ah inay u shaqeyso sidii il dabiici ah oo borotiin ah, waxayna leedahay shaqooyin badan sida gelatinous, xumbada, emulsifying iyo qufulka biyaha. Hawlahani waa kuwo aad muhiim ugu ah buuxinta baahiyaha waxsoosaarka nacnaca. Intaa waxaa dheer, gelatin wuxuu kaloo leeyahay astaamaha dareenka "hufan" iyo "dhadham dhexdhexaad", kaas oo buuxin kara baahiyaha macaamiisha midabka iyo dhadhanka nacnaca. Guryaha hufan waxay bixin karaan cirridka ciridka. Gelatin malahan dhadhan gaar ah, sidaa darteed waad u isticmaali kartaa inaad ku sameyso dhammaan noocyada alaabta dhadhanka, sida taxanaha miraha, taxanaha cabitaanka, taxanaha shukulaatada, xitaa taxanaha cusbada iyo wixii la mid ah.
Kala diriddii gelatin cunto waxaa lagu qaadi karaa laba talaabo. Tallaabada ugu horreysa waa in la sameeyogelatin cunto dhuuq biyo oo balaadhi ilaa 30 daqiiqo biyo qabow oo la kariyey. Tallaabada labaad waa in la kululeeyo biyaha (ka dib karkarinta iyo qaboojinta illaa 60-70 ℃) ilaa la ballaariyeygelatin cunto ama kululee si aad u sameyso gelatin cunto ku milmi xalka gelatin loo baahan yahay.
Gelken oo ah soo saare xirfad-yaqaan gelatin ah, wuxuu ku siin karaa geel Xalaal shahaado buuxda. Waxaanan diirada saareynaa gelatin Halal sanado badan. Suuqa ugu weyn ee gelatinkeenna xalaasha ahi waa adduunka oo dhan, gaar ahaan Hindiya, Vietnam, Thailand iyo wixii la mid ah. Waxa aan eryanayno waa inaan alaabteenna ka dhigno kuwa ugu fiican.
Xalaal gelatin, waxaa loola jeedaa in gelatin la soo saaray iyada oo aan lahayn wax alaabooyin ku saleysan bocorin
Sida gelatin fasalka cuntada, xalaal ah gelatin wuxuu hodan ku yahay 18 nooc oo ah amino acids kuwaasoo lagama maarmaan u ah jirka aadanaha. Xalaal gelatin waxaa si weyn looga isticmaalaa warshadaha cuntada waana mid tayo wanaagsan leh oo lagu daro cuntada.
Sida mid ka mid ah ugu weyn alaab-qeybiyeyaasha gelatin iyo soosaarayaasha Shiinaha, Gelken waxay ku siin karaan gelatin kalluun tayo iyo qiimo tartan. Waxaan u dhoofinay gelatin kalluunka Koonfurta Ameerika, Yurub, Fiitnaam, Thailand, Hindiya iyo Kuuriya iyo waddan kale.
Kalluunka gelatin, waxaan aad uga walwalsanahay alaabta ceyriinka ah. Waa inuu nadiif ahaadaa iyo kalluunka cusub. Iyo urta oo aad loogu soo dhoofiyo kalluunka gelatin. Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyad casriyeysan oo horumarsan si aan kalluunkayaga gelatin ah uga sameysanno ur yar oo aan u daboosho baahida macaamiisheena.
Isla mar ahaantaana, kalluunka gelatin waa nooc ka mid ah maaddooyinka cuntada, kaas oo aad ugu habboon macaamiisha ka taxadaraya joogtaynta.
Kalluunka gelatin waxaa laga soo saaraa maqaarka kalluunka iyo miisaanka kalluunka tilapia. Gelatin waa biopolymer caan ah, kaas oo laga diyaariyo unugyada isku xira xayawaanka (sida maqaarka iyo lafaha) ka dib marka la daweeyo iyo isbadalka, kadibna laga soo saaro heerkulka ku habboon.
Dad badan ayaa isticmaala gelatin loogu talagalay marshmallow. Sidagelatin loogu talagalay marshmallow, Qalabkeeda ceyriin waa maqaarka, lafta, tendon, tendon iyo miisaanka lo'da cusub, doofaarrada, idaha iyo kalluunka ay bixiyaan kawaanada xoolaha, warshadaha hilibka, qasacadaha, suuqyada qudaarta, iwm. Kuwaas oo ka gudbay baaritaanka karantiilka. Wax soo saarka gelatin waa cadaan ama jaalle khafiifa, translucent iyo dhalaalaya dhalaalaya ama budo. Waa midab aan lahayn, dhadhan lahayn, aan isbeddel lahayn, hufan oo adag maaddada aan dhalada ahayn.
Gelatin nacnac cirridka waa shey muhiim ah oo lagu daro warshadaha cuntada. Gelatin la cuni karo waxaa badanaa loo isticmaalaa inuu yahay dhumuc cunto, wakiil jilicsan, xasiliyaha, emulsifier iyo caddeeyaha waxyaabaha hilibka, keega, jalaatada, biirka, jelly, waxyaabaha qasacadaysan iyo waxyaabaha casiirka laga helo.gelatin nacnac cirridka Gelatin la cuni karo waa jaalle cirro leh, aan udgoon lahayn, aan lahayn dhadhan, biyo-shubis iyo dhadhan. Gelatin nacnac cirridka waxaa laga soosaaray hargaha / lafaha bovine cusub, ee aan la soo saarin, waana borotiin culeyskeedu sarreeyo (oo aan lahayn dufan iyo kolestarool) kana kooban 18 amino acids.
Gelken waxay siisaa kosher gelatin shahaado buuxda iyo dhamaan nidaamyada gelatinkeena kolasher waxay si adag u buuxinayaan shuruudaha Kosher. Gelken Kosher gelatin way fududaan doontaa in dadka badankiisu aqbalaan.
Kosherl gelatin waxaa laga sameeyaa lafaha bovine. Waa nadiif waana ka nadiif tahay wasakhda, oo leh laydh sare iyo shaashad cad.Kosher gelatin wuxuu leeyahay milmi deg deg ah. Markaad sameyneyso cuntada la dubay sida keega mooska,kosher gelatin waa lagu milmi karaa adigoo ku qoynaya biyo qabow hal daqiiqo. Markaad samaynaysid caano barafaysan, dufan iyo macmacaan kale, kosher gelatin si toos ah ayaa loo gelin karaa maaddooyinka kululaynta iyo kicinta.